Dumarka Garsooreyaasha Noqonaya, Ha Kala Doortaan Inay UUR Yeeshaan Iyo Shaqada - Laacib
HomeWararka CiyaarahaDumarka Garsooreyaasha Noqonaya, Ha Kala Doortaan Inay UUR Yeeshaan Iyo Shaqada
Dumarka Garsooreyaasha Noqonaya, Ha Kala Doortaan Inay UUR Yeeshaan Iyo Shaqada
Garsoorihii hore ee horyaalka Premier League ee Mark Clattenburg ayaa abuuray dood muran dhalinaysa xilli ay garoomada kusoo badanyaaan garsooreyaal dumar ah.
Clattenburg oo waraysi bixiyey ayaa sheegay inay tahay in ‘dumarka garsooreyaasha ahi kala doortaan inay uur yeeshaan oo ay ilmo dhalaan iyo inay kubadda cagta ku jiraan’, taas oo ah arrin uu ku tilmaamay mid dib u dhigaysa inay xirfaddan kusii jiraan.
46 jirkan waxa uu tibaaxay in gabadha garsooraha ahi marka ay uur yeelato in aanay gudan karaynin shaqadii garsoorka ee orodka iyo cadaadiska badnayd, waxaanu hoosta ka xarriiqay inay tahay caqabad ku adkaynaysa inay la tartamaan ragga ay isku xirfaddan ku jiraan.
Mark Clattenburg oo lagu tilmaami jiray garsooraha ugu wanaagsan adduunyada, ahaana ninkii hayay finalkii Champions League 2016, waxa uu yidhi: “Mar walba waxa aanu Premier League ku haysan jirnay caawiye garsoor oo gabadh ah waana Sian Massey, haddana gabadh ayaa garsoor ka ah Football League, waana Rebecca Welsh.
“Markaa dumarku horumar ayay ka samaynayaan tartamada kubadda cagta ee ragga. Haddii aad eegto UEFA, haweenay Faransiis ah ayaa garsoore ka ahayd finalkii Super League. UEFA ayaanay aad iyo aad ugu badan yihiin dumarku.
“Laakiin dhibaato ayaa haysata dumarka, gaar ahaan kuwa garsooreyaasha ka ah kubadda cagta. Haddii ay uur yeeshaan xilliga waayahooda garsoorenimada, muddo dheer ayay ka joojin kartaa shaqada. Markaa waa inay kala doortaan, inay uur yeeshaan oo ay carruur dhalaan iyo inay doonayaan inay garsooreyaal noqdaan.”